Shower Stop Valve၊ Water Stop Valve များ၊ China မှ Brass Stop Valve များ
ဖေါ်ပြချက်:Stop Valves များ, Shower Stop Valve, Water Stop Valve များ, ကြေးဝါ Stop Valve,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > အဆို့ရှင် > Stop Valves များ
Stop Valves များ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Stop Valves များ, Shower Stop Valve ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Water Stop Valve များ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Solder Ends နှင့်အတူ 1/2 လက်မကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မှုတ် - အဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အနက်ရောင် manuel ကြေးဝါကိုရပ်တန့်အဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လေထုလွှတ်ပေးရန်အဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပူရောင်းအားရပ်တန့်အဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အတုကြေးဝါရေချိုးခန်းရပ်တန့်အဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Hot sale shower stop valves  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အရည်အသွေးမြင့်ရေချိုးခန်းမှတ်တိုင်အဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Hot sale ရေချိုးခန်းဆို့ရှင် Valve  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြေးဝါရေချိုးခန်းအဆို့ရှင်အဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
manuel နှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်ရပ်တန့်အဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အရည်အသွေးမြင့်မားသောအဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဂဟေဆော်မှုအဆုံးရှိကြေးဝါကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Solder Ends နှင့်အတူ 1/2 လက်မကြေးဝါ Stop Valve  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြေးဝါ Stop Valve ကိုပွတ် Chromed  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သွပ်အနားကွပ်နှင့်အတူကြေးဝါရေချိုးခန်း Valve  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သွပ်အနားကွပ်နှင့်အတူကြေးဝါကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သံမဏိအနားကွပ်နှင့်သွပ်ဘူး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Acryl ဖုနှင့်အတူကြေးဝါရေချိုးခန်း Valve  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Solder Ends နှင့်အတူ 1/2 လက်မကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆို့ရှင်
အရွယ်အစား: 1/2 ' ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အမည်ခံဖိအား: 10 ဘား အဆိုးဆုံးအလယ်အလတ်: ရေ worik အပူချိန်: -10 120 မှ 120
မှုတ် - အဆို့ရှင်
အရွယ်အစား - ၁/၂ မှ ၁ သို့ ' ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် Woring ဖိအား - ၁၆ bar မှ ၂၅ bar အထိ အသုံးပြုမှု - မီးဖိုချောင်၊ အိမ်၊ စီးပွားဖြစ်၊...
အရွယ်အစား: 1/4 လက်မမှ 1/2 လက်မအထိ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား: 16 bar မှ 25 bar...
အရွယ်အစား: ၁.၂ လက်မမှ ၁ လက်မအထိ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား: 16 bar မှ 25 bar...
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ နိုးထလာတဲ့အပူချိန် - -၂၀ ဒီဂရီမှ ၁၁၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် နိုးထမှု - ၁၆ ဘားမှ ၂၅ ဘားအထိ Woking အလတ်စား -...
SIZE: Φ16 ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည်။ အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား: 16 bar မှ 25 bar သို့ Woking အလတ်စား -...
ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အရွယ်အစား: 1/2 လက်မ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား: 16 bar မှ 25 bar သို့ အလုပ်လုပ်သည့်အလတ်စား:...
ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အရွယ်အစား: 1/2 လက်မ အမည်ခံဖိအား: 10bar; အလုပ်လုပ်အလတ်စား - ရေ; အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန်: -10 ° C မှ 120 °...
ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်သောအပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ ၁၁၀ ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်စ်အထိဖြစ်သည် အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား: 16 bar မှ 25 bar...
SIZE: Φ16 ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည်။ အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား: 16 bar မှ 25 bar သို့ အလုပ်လုပ်သည့်အလတ်စား:...
ဂဟေဆော်မှုအဆုံးရှိသောကြေးဝါ stop valve သည်ရေအတွက်ဖြစ်သည်။ အရွယ်အစား - ၁/၂ မှ ၁ သို့ ' ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် နိုးထနေသောဖိအား - ၁၆ ဘားမှ ၂၅ ဘားအထိ Function: မီးဖိုချောင်၊ အိမ်၊...
ဂဟေဆော်မှုအဆုံးရှိသောကြေးဝါ stop valve သည်ရေအတွက်ဖြစ်သည်။ အရွယ်အစား - ၁ / ၂'၃ / ၄ ' ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် နိုးထနေသောဖိအား - ၁၆ ဘားမှ ၂၅...
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အမည်ခံဖိအား: 10bar; အလုပ်လုပ်အလတ်စား - ရေ; အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန်: -10 ° C မှ 120 °...
ကြေးဝါ Stop Valve ကိုပွတ် Chromed
ကြေးဝါ Stop Valve ပွတ်, Chromed အမည်ခံဖိအား: 10bar; အလုပ်လုပ်အလတ်စား - ရေ; အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန်: -10 ° C မှ 120 ° C; Thread: ISO228 / 1, BSP, NPT စသဖြင့်လိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ ပစ္စည်း: တောင်းဆိုမှုကိုအဖြစ် CW614N, CW617N,...
သွပ်အနားကွပ်နှင့်အဖု Solder အဆုံးသတ်နှင့်အတူကြေးဝါရေပန်း Valve အမည်ခံဖိအား: 10bar; အလုပ်လုပ်အလတ်စား - ရေ; အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန်: -10 ° C မှ 120 ° C; Thread: ISO228 / 1, BSP, NPT စသဖြင့်လိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ ပစ္စည်း: တောင်းဆိုမှုကိုအဖြစ် CW614N,...
သွပ်အနားကွပ်နှင့်ဖုနှင့်အတူကြေးဝါရေချိုးခန်း Valve အမည်ခံဖိအား: 10bar; အလုပ်လုပ်အလတ်စား - ရေ; အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန်: -10 ° C မှ 120 ° C; Thread: ISO228 / 1, BSP, NPT စသဖြင့်လိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ ပစ္စည်း: တောင်းဆိုမှုကိုအဖြစ် CW614N, CW617N,...
သွပ်အနားကွပ်နှင့်ဖုနှင့်အတူကြေးဝါရေပန်း Valve အမည်ခံဖိအား: 10bar; အလုပ်လုပ်အလတ်စား - ရေ; အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန်: -10 ° C မှ 120 ° C; Thread: ISO228 / 1, BSP, NPT စသဖြင့်လိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ ပစ္စည်း: တောင်းဆိုမှုကိုအဖြစ် CW614N, CW617N,...
Acryl ဖုနှင့်အတူကြေးဝါရေချိုးခန်း Valve
သွပ်အနားကွပ်နှင့် Acryl ဖုနှင့်အတူကြေးဝါရေပန်းအဆို့ရှင် အမည်ခံဖိအား: 10bar; အလုပ်လုပ်အလတ်စား - ရေ; အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန်: -10 ° C မှ 120 ° C; Thread: ISO228 / 1, BSP, NPT စသဖြင့်လိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ ပစ္စည်း: တောင်းဆိုမှုကိုအဖြစ် CW614N, CW617N,...
တရုတ်နိုင်ငံ Stop Valves များ ပေးသွင်း
ရပ်တန့်အဆို့ရှင်ကျအဆို့ရှင်အလယ်၌တစ်ဦးထိုင်ခုံပေါ်ကိုတစ်ဦးရော်ဘာ gasket screwing အားဖြင့်ပိတ်ထားရသည်။ Pros သာထိုကဲ့သို့သောနစ်မြုပ်နှင့်အိမ်သာနှင့်ပြင်ပ sillcocks အဖြစ်လ်တာများအတွက် shutoff ဆို့ရှင်အဖြစ်ပြုမူကြောင်းသေးငယ်တဲ့ဗားရှင်းကိုအသုံးပြုပါ။ စီးဆင်းနေသည့်လမ်းကြောင်းကြောင့်စီးဆင်းသောရေ (ကိစ္စရပ်အများစုတွင်ရေသည်) စီးဆင်းမှုသည်မတတ်နိုင်ပါ။ ယင်းအဆို့ရှင်ကိုလမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းနှင့်အတူမြှား (အဆို့ရှင်၏ဘေးထွက်သို့သွန်းလောင်း) နှင့်အတူလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် orientation ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ရာဘာ gasket ၏အောက်ခြေသို့ရေစီးဆင်းသည်။ အကယ်၍ အဆို့ရှင်ကိုနောက်ပြန်ထားလျှင်၊ စီးဆင်းမှုသည် gasket ကိုအ ဆို့ရှင် ၏ထိပ်ကနေဖယ်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။
Stop Valves များ Shower Stop Valve Water Stop Valve များ ကြေးဝါ Stop Valve